उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? – नेपाल टेलिभिजन
गृह पृष्ठ/विशेष/उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?
उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?
नेपाल टेलिभिजन १७ भाद्र २०७७, २०:१०
काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अवधि अर्को एक हप्ता थपिएको छ । गृह मन्त्रालयसँगको परामर्शमा उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको आजको बैठकले केही सेवालाई सहजीकरण गर्दै अर्को एक साताका लागि अत्यावश्यक र तोकिएबाहेकका गतिविधि रोक्ने गरी निषेधको आदेश जारी गरेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : उपत्यकाको निषेधाज्ञा एक साता थप